Gịnị bụ Net Nnọpụiche? | Martech Zone
Saturday, March 10, 2007 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Abụ m onye ofufe nke nnukwu azụmahịa na m bụghị nke ukwuu nke doomsday theorist; agbanyeghi, Nnọpụiche Net buru ibu nye m. Ndụ m niile na ike ịkwado ụmụ m dabere na ikike ọrụ m na-eji na ịntanetị, ikike m iji ịntanetị… ọ na-aghọkwa ụmụ m ngwa ngwa. Ighapu thentanetị n'iji uzo di oso ma di nwayo adighi enye oke, o gha eli uzo ndi nwayọ nwayọ. Nke ahụ pụtara na ikike anyị, dị ka ndị na-ede blọgụ na ndị ọchụnta ego azụmaahịa, ga-apụ n'anya.
Ekwenyere m na nke ahụ ga - eme ka enwepụ obere akụ na ụba ga - emerụkwa akụ na ụba anyị ma, mechakwa, ụtụ isi na - enweta. Nke ahụ bụ ọnọdụ dị egwu ma gbanwee mgbanwe nke akụ na ụba na ike nke bringsntanetị na-ewetara obere olu - ma weghachite ya n'aka ndị nwere ego - dịka ọ mere na akwụkwọ akụkọ, egwu, redio, na telivishọn.
You n'ezie ekwesịghị ịrụ ọrụ na idozi ihe ọ bụghị naanị na anaghị emebi broken kama na-agbanwe ụwa anyị bi na imeghe akụnụba na azụmaahịa ọ bụla nke ụbọchị.
Enwekwara ụfọdụ ekike ebe a. Ulo oru dika Akamai enyerelarị ndị azụmaahịa aka 'mee ngwa ngwa' nnyefe ọdịnaya ha na net:
Akamai EdgePlatform gunyere sava 20,000 emere na mba 71 nke na-enyocha intaneti oge niile? okporo ụzọ, ebe nsogbu na ọnọdụ niile. Anyị na-eji ozi ahụ iji jiri amamihe bulie ụzọ gasị ma mepụta ọdịnaya maka nnyefe ọsọ ọsọ, nke a pụrụ ịtụkwasị obi karị. Ka Akamai na-ejikwa 20% nke ọnụọgụ Internetntanetị zuru oke taa, echiche anyị banyere isntanetị bụ ihe zuru oke ma dị ike anakọtara ebe ọ bụla.
N'oge na-adịbeghị anya anyị malitere iji Akamai na ọrụ anyị ma ọ bụ mmezi ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na nzaghachi ngwa anyị gburugburu ụwa… ebe ụfọdụ ruru 80%. Nke a, n'ezie, teknụzụ nke na-adịghị ọnụ maka obere ụlọ ọrụ; agbanyeghị, ọ bụ azụmaahịa n’ime ya. Yabụ na ọbụghị naanị na 'ụzọ ọsọ' ndị a ka anyị chọrọ, anyị nwere ihe ngwọta ga-enyere nnukwu azụmaahịa aka na ntinye ngwa ngwa. Yabụ kedu ihe anyị ji ekwu maka nke a?
Banye arịrịọ ma nye onyinye Chekwaa Internetntanetị.
Ọ ka na-agbagwoju m anya maka ihe Neutrality Netwọk bụ n'ezie. Ị nwere ike ịnye ozi na-enweghị isi?
Ndị nwere okporo ụzọ ịntanetị ga-achọ ịmepụta ụzọ abụọ maka okporo ụzọ. Otu ụzọ (dị ka ọ dị ugbu a) ga-abụ ụzọ ịntanetị nkịtị. Ụzọ ọzọ; Otú ọ dị, nwere ike ịbụ ụzọ ebe telecoms nwere ike na-ana maka ngwa ngwa, bandwidth ka mma maka ịkwụ ndị ahịa ụgwọ.
Echiche dị n'azụ ya bụ na azụmaahịa ziri ezi nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ibuga ọdịnaya ha ka mma nye gị ma ọ bụ mụ. N'ụzọ dị otú a, ha ekwesịghị ichegbu onwe ha banyere ịnweta okporo ụzọ site na okporo ụzọ dị ugbu a. Ọ bụrụ na ị kụrụ Google dịka ọmụmaatụ, ma ha na-akwụ ụgwọ maka bandwidth abawanye, ebe nrụọrụ weebụ ha ga-enwe ike ibu ngwa ngwa.
Na akwụkwọ, ọ na-ada ụda. Otú ọ dị, ihe ga-esi na ya pụta yikarịrị ka ọ ga-abụ ọdachi. A gaghị enwe ihe mkpali maka ụlọ ọrụ ndị a iji melite arụmọrụ na akụrụngwa nke ịntanetị maka mụ na gị. N'ezie, ihe dị iche ga-abụ eziokwu. Ọ bụrụ na ha ekwe ka ụzọ 'nkịtị' nke ịntanetị daa na arụmọrụ, ọ ga-adọtakwu azụmahịa maka ụzọ 'azụmahịa'.
Ugbu a, ọ bụrụ na Verizon ma ọ bụ AT&T ma ọ bụ Comcast na-emeziwanye netwọkụ ha na bandwit, onye ọ bụla na-ahụ ọganihu. Nke ahụ bụ 'na-anọpụ iche' na Neutrality Netwọk. Ndị dị ka m ga-achọ idobe ya otu ahụ. Ọ bụrụ na ụmụ okorobịa a na-ewu netwọk ngwa ngwa, nke ka mma nke ị ga-akwụ ụgwọ, mụ na gị agaghị enwe azụmahịa. Ndị mmadụ agaghị enwe nsogbu ịbịa na saịtị anyị n'ihi na ọ ga-adị ngwa ngwa.
Na mgbọrọgwụ nke nchegbu m bụ na, ọ bụ ezie na, ụlọ ọrụ ndị a na-etinye ego na Ịntanetị - ha emeghị ya. Ọ bụ ego ụtụ isi US nwetara ịntanetị n'ala… anyị ekwesịghị ịhapụ!
Nke a ọ bụ kpọmkwem maka US ma ọ bụ ihe niile. Mana, echere m ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime anyị na-abụghị ụmụ amaala US nwere saịtị akwadoro na US, ọ na-emetụta anyị nke ukwuu.
Na-aga blog banyere ya. Daalụ 🙂
Ọ nwere ike ime ebe ọ bụla, mana ọ bụrụ na ọ na-eme na US, nsonaazụ ya ga-adaba nke ọma. Nnukwu azụmahịa nke mba ndị ọzọ ga-arịgoro na bandwagon, ebe ọ bụ na nke ahụ ga-abụ akụrụngwa ga-akwado irute ọtụtụ mmadụ. Ndị dị ka mụ na gị ga-amanye ịwepụta ego ma ọ bụ hapụ ha n'ime unyi.
Ee, ghọtara na. Ọfọn, enwere m olileanya na ha agaghị aga nke ọma, ọ gwụla ma ha jisiri ike "inye" onye ọ bụla.
Hi Doug - M na-arụ ọrụ na njikọ aka na ịntanetị ma na-agba ndị na-agụ gị ume ka ha lelee video a maka nghọta ka mma nke arụmụka nnọpụiche net na ndị egwuregwu metụtara. Gaa letakwa anyị blog maka ozi ndị ọzọ. Daalụ!